अष्ट्रेलियासँगको दोस्रो भेटमा नेपालले जादू गर्ला? यस्तो छ नेपालको रणनीति | नेपालन्युज
अष्ट्रेलियासँगको दोस्रो भेटमा नेपालले जादू गर्ला? यस्तो छ नेपालको रणनीति
फोटोः नेपाल फुटवल संघ
फिफा विश्वकप-२०२२ तथा एसियन कप-२०२३ अन्तर्गत दोस्रो चरणको छनोटको अन्तिम खेलमा नेपालले आज अष्ट्रेलियासँग भिड्दै छ।
कुवेत सिटीस्थित जाबेर अल अहमद अन्तराष्ट्रिय स्टेडियममा नेपालले अष्ट्रेलियासँग राति ९:४५ बजे खेल्दै छ। एसियाली फुटबलको पावरहाउस अष्ट्रेलियालाई पराजित गर्नु नेपाललाई फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ।
तर, नेपाल अष्ट्रेलियासँग उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजनामा छ। नेपालको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताईरीले अष्ट्रेलियासँग राम्रो खेल पस्कने बताए। 'आशा छ हामी अष्ट्रेलियाविरुद्ध अर्को राम्रो खेल खेल्नेछौं। हाम्रो खेल्ने शैली सुधार भएको छ र हामीले हाम्रा समर्थकहरुलाई खुशी पार्न सकेका छौं,' उनले भने।
अष्ट्रेलियाले पाँच पटक विश्वकप खेलिसकेको छ। त्यही भएर नेपाललाई हराएर अष्ट्रेलिया विश्वकपको तेस्रो चरणको छनोटमा पुग्न चाहन्छ। समूह 'बी'मा अष्ट्रेलिया १८ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। अष्ट्रेलिया अपराजित रहने समूहको एक्लो टिम हो।
नेपालले अष्ट्रेलियासँग यसअघि एक खेल खेलेको छ। जारी विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपालले २०१९ को अक्टोबर १० मा अष्ट्रेलियासँग खेलेको थियो। अष्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा नेपालले फराकिलो हार व्यहोरेको थियो। क्यानबेरास्थित जीआईओ स्टेडियममा नेपाल घरेलु टिमसँग ५-० ले पराजित भएको थियो।